QM oo soo saartay warbixin ka hadlaysa xorriyada hadalka Soomaaliya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta QM oo soo saartay warbixin ka hadlaysa xorriyada hadalka Soomaaliya
Qaramada Midoobay ayaa soo saartay warbixin ay ugaga hadlayso xoriyada hadalka ee dalka Soomaaliya iyadoo warbixinta lagu sheegay in horumar laga sameeyay xoriyada hadalka balse weli loo baahan yahay in la sii hormariyo.
Halkan hoose ka aqriso warbixinta oo dhameystiranū
Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa muujineysaa in inkastoo xoogaa horumar ah uu jiro, sharci la’aantu ay hortaagantahay horumarka
Soomaalidu waxay qiimeeyaan xorriyadda hadalka. Waa qayb muhim ah oo ka mid ah dhaqankooda. Waxaa muhim u ah dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed inay xor u noqdaan inay dhiibtaan ra’yigooda, gaar ahaan iyadoo dalku u diyaargaroobayo doorashooyinka 2020-2021,” ayuu yiri Ergeyga Gaarka ah Keating. “Si Xorriyadda hadalku ay u noqoto mid dhab ah, Soomaaliya waa inay damaanad qaaddaa madax-bannaanida warbaahinta, sharciga warbaahinta waafajiso Dastuurka Federaalka Ku meelgaarka iyo halbeegyada xuquuqda aadanaha ee gobolka iyo kuwa caalamiga ah, ayna baabi’iso/tirtirto sharciyada xaarantinimaynaya faafinta “wararka beenta ah”